सावधान ! कोठामा कोइला र हिटरको प्रयोग त गर्दै हुनुहुन्न – NawalpurTimes.com
सावधान ! कोठामा कोइला र हिटरको प्रयोग त गर्दै हुनुहुन्न
प्रकाशित : २०७६ पुष ३ गते ११:२४
‘सावधानी नपनाउँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउनदेखि ज्यान नै ज्यान सक्छ’
देशभर अहिले चिसो बढेको छ । सकेसम्म घरभित्र चिसो नछिरोस् भनेर झ्याल÷ढोका सबै बन्द गरेर राखिन्छ । साथै, कोठा र शरीरलाई न्यानो बनाउनको लागि हिटर, कोइला आदिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । तर, यस्ता कुराहरु प्रयोग गर्दा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा भने कमैले मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ ।
४ वर्ष पहिले पोखरामा यसरी नै कोठभित्र कोइला बालेर न्यानो बनाउने हुँदा धुवाँले निस्सासिदा कोठाभित्र एकै परिवारका चारजनाको मृत्यु भयो । करिब दुई वर्ष पहिले इन्जिनियर दम्पत्ति पुष्कर जोशी र अप्सरा श्रेष्ठको चिसोको समयमा प्रयोग गरिएको हिटरबाट सल्केको आगोको लप्काले जल्दा ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
गत मङ्सिर ३० सोमबार कीर्तिपुर नगरपालिका–८ सुन्दरबजारमा आमा र दुई महिने छोराको निस्सासिएर मृत्यु भयो । सुत्केरी र नवजात शिशुलाई तातोको लागि राति मकलमा आगो बालेर सुत्दा यो अप्रिय घटना भएको थियो ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । चिसोबाट बच्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने यी साधनहरुले कतिपय अवस्थामा जीवननै असुरक्षित बनाउने गरेको छ ।
दुर्घटना घट्नुभन्दा पहिलाका लक्षणहरु
लामो समय हिटरमा बस्दा शरीरमा केही समस्या आउन लागेको छ भने सुरुमा नाक–मुख सुख्खा हुने, रुघा लाग्ने, लामो समय खोकी लाग्ने जस्ता छाती सम्बन्धी समस्याहरु देखिन्छन् । यी बाहेक लामो समय हिटरमा बस्दा पटक—पटक टाउको दुख्ने समस्या दोहोरिन्छ । हावामा कार्बाेनडाइड अक्साइडको मात्रा बढ्ने अथवा अक्सिजनको मात्रा कम हुने हुँदा यस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् । त्यसैले धेरै लामो समय हिटर वा अन्य तातो बनाउने कोइला आदि को अगाडी बस्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन ।
त्यसमा पनि राती सुत्ने बेलामा झ्याल, ढोका बन्द गर्ने अनि हिटर ननिभाइ सुत्दा विभिन्न दुर्घटनाहरु हुने र ज्यानै जान सक्ने सम्भावना त छँदैछ । त्यसैले चिसोको समयमा निस्सासिएर हुने दुर्घटनालाई कम गर्नको लागि सम्बन्धित व्यक्ति आफैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बन्द कोठामा यस्ता साधान प्रयोग गर्दा आउने जोखिमको बारेमा परिवार, घरछिमेकलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।